I-Apple izakuvula iVenkile entsha yeApple eWuhan ngoSeptemba | Ndisuka mac
Isixeko saseWuhan, kwiphondo laseHubei, saziwa kwihlabathi liphela njengendawo yokuqala ubhubhane we-coronavirus, intsholongwane etshintshe indlela esiphila ngayo ngeendlela ezininzi, nangona kancinci singena entsha eqhelekileyo. Ngokuchanekileyo kwesi sixeko, izicwangciso zeApple vula iVenkile entsha ye-Apple ngoSeptemba olandelayo.
Kubonakala ngathi utyalo-mali olukhulu olwenziwe ngu-Apple e-China kwiminyaka embalwa edlulileyo, evula iivenkile ezingama-42 kwilizwe liphela, azonelanga ukuqhubeka nokugcina eli lizwe njengeyona nto iphambili ingeniso kwinkampani kaTim Cook. Ngapha koko, kwiziphumo zemali azibhengeza kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, I-60% yengeniso iyonke zivela kweli lizwe.
Le Ivenkile entsha yeApple iya kubekwa eWuhan International Plaza kwaye kulindeleke ukuba kuvulwe Ngokuhambelana nokusungulwa kweentengiso kwe-iPhone 13, Umboniso owawuza kucwangciselwa uSeptemba, nangona kungenxa yokunqongophala kwezinto ezichaphazela wonke umntu, inkampani esekwe eCupertino inokulibazisa ukuboniswa kunye nokumiliselwa okulandelayo ku-Okthobha, njengoko yenzayo kunyaka ophelileyo nge-iPhone 12.
Iprojekthi yokuhombisa ngaphakathi yeVenkile yeApple eWuhan International Plaza ibikhona ivavanywe kwaye yamkelwa yiHubei Government Service Network, njengoko kuxeliwe nguPatent Apple. Ivenkile, eya kuhlala kwi-900 yeemitha zesithuba, iya kubekwa kumgangatho wesibini weWuhan International Plaza.
U-CEO we-Apple uTim Cook uthe ikota yesithathu "yayiyikota eyomeleleyo ngokungummangaliso" ingeniso evela China, kwinkqubo ebeka ingxelo yengeniso kaJuni ye- $ 14.760 yezigidigidi.
Ukuza kuthi ga ngoku, iApple inayo Iivenkile ezingama-42 kwilizwekazi lase China kwizixeko ezingama-21. IShanghai inezona ndawo zithengiswayo, zisixhenxe, zilandelwa yiBeijing, zinesihlanu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Apple ukuvula iVenkile entsha yeApple eWuhan ngoSeptemba
I-Telegram ye-Mac ihlaziywa ngeendaba zenguqulo ye-iOS